प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा छानो फेर्न एक अर्ब ३६ करोड « रिपोर्टर्स नेपाल
(Saturday 26th September 2020)
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा छानो फेर्न एक अर्ब ३६ करोड
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७७, बुधबार
झापा, भदौ ३१ । जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ५ मा अब कोही पनि नागरिकले फुसको छानोमा बस्नु नपर्ने भएको छ । सबै विपन्न नागरिकका लागि सरकारले खरको छानो हटाउँदै जस्ता पाताको छानो लगाइदिन शुर गरेसँगै झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्ने चार पालिकामा फुसको छानो परिवर्तन हुन लागेको हो ।
यसका लागि सरकारले रु एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटले सबै विपन्न नागरिकको घर निर्माण गरिने छ ।
यता सांसद पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत दमकमा १५ र गौरीगञ्जमा १३ वटा नमूना घर निर्माण हुने भएका छन् । आवास योजनाअन्तरगत नै तराई मधेश समृद्ध कार्यक्रममार्फत पनि गौरीगञ्ज र गौरादह नगरपालिकामा विपन्न नागरिकका लागि घर निर्माण गरिने भएको छ । रासस
दाङमा सवा तीन अर्ब राजश्व सङ्कलन
घोराही, १० असोज: कोरोना महामारीको समयमा पनि दाङमा सवा तीन अर्ब राजश्व सङ्कलन भएको छ
लगातार घटेको सुनको मूल्य फेरि बढ्यो
काठमाडौं, असोज १० । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य शुक्रवार बढेको छ । लगातार तीन दिनदेखि
नेपाल एसबिआई बैंक सञ्चालक समिति सदस्य श्रेष्ठ जनसेवाश्री पञ्चमबाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक सञ्चालक समिति सदस्य तथा हामा आएरन एन्ड स्टिल प्रालिका अध्यक्ष
दुई महिनामा ५७ करोडको प्याज आयात,भारतले निर्यात रोकेपछि भदौमा थाेरै घट्यो
काठमाडौँ ९ असोज। चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ५७ करोड रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ।
लघुवित्तले इ-बैंकिङ काराेबार गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाे छैन : राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ, ९ असोज: नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले इ-बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने बताएको छ।
सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि
काठमाडौँ ९ असोज। लगातार तीन दिन ओरालो लागेको सुन तथा चाँदीको मूल्यमा असोज ९ गते,
काठमाडौं, असोज ९ । काठमार्डौ उपत्यकाका नदी नालामा उत्खनन् गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न नपाइने
मोदीले उठाए संयुक्तराष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतको सहभागिताको विषय
एजेन्सी, १० असोज । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यका रुपमा
यी हुन् कोरोना संक्रमणबाट आज मृत्यु पुष्टि भएका ८ जना (विवरणसहित)
काठमाडौं, १० असोज । आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप ८ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ
बलात्कार ! आखिर किन ?
असोज १०, काठमाण्डौ । देशको सुरक्षा व्यवस्था नभएर हो वा समाजमा विकृति बढेर हो, पछिल्लो